Maxaad Dooneysaa Inaad Ka Ogaato Kirada Marka Dambe Aad Mulkiyadda La Wareegto Iyo Heshiiska Mulkiyadda | LawHelp Minnesota
Maxaad Dooneysaa Inaad Ka Ogaato Kirada Marka Dambe Aad Mulkiyadda La Wareegto Iyo Heshiiska Mulkiyadda
Maxaad Dooneysaa Inaad Ka Ogaato Kirada Marka Dambe Aad Mulkiyadda La Wareegto Iyo Heshiiska Mulkiyadda (PDF)464.96 KB
KA DIGTOONOOW! Iibshada guryaha waa mid aad u adag (cakiran). Dad badan ayaa lacag iyo waqti kaga lumaa marka ay guryaha ku kireystaan in ay marka dambe iibsanayaan adeegsada heshiis lahaashosan karaan, ama marka ay iibsanayaan adeegsada heshiis lahaasho. Waxaa haboon in aad la tashato khubaro ka hor inta aadan iibsan.
Faraqa u dhaxeeya “kirada aad marka dambe yeelaneyso” iyo Heshiiska Mulkiyadda
Kirada aad marka dambe guriga iibsan karto waxa ay inta badan ka dhigan tahay in aad hadda kireysaneyso, laakiin aad iibsan karto marka dambe. Marka aad gasho heshiis noocaas ah, weli waxa aad weli tahay kireyste, iibiyuhuna weli waa kireeye, ilaa kala gadashada ugu dambeysa.
Heshiiska mulkiyadda wuu ka duwan yahay. Marka ugu horeysa oo aad saxiixdo heshiiska, waxa aad tahay mulkiilaha dhinac kasta, marka laga reebo in aadan heysan cadeynta mulkiyadda (warqadaha). Adiga ayaa mas’uul ka ah dayactirka iyo hagaajinta, iyo inta badan canshuurta iyo ceymiska.
Kirada Aad Marka Dambe Yeelato
Heshiisku waa inuu noqdaa mid qoraal ah! Ha ogolaan wax aan qoraal laga dhigin oo aan qorneyn. Sharcigu ma dhaqan geliyo heshiis guri ku iibsato haddii aanu aheyn qoraal.
Waa in heshiiska ay ku cad yihiin qeybta kirada noqoneysa iyo qeybta loo tixgelinayo qiimaha iibsashada guriga.
Waa in ay heshiiska ku cad yihiin qiimaha kala iibsashada, iyo qodobada lagu heshiiyey. Waa in ay ku cad yihiin in aad galeysaan heshiiska mulkiyadda ama lagaa doonayo in aad deyn ka soo qaadato bangiga. Haddii aad dooneyso deynta guryaha, la xiriir bangiga oo isku day in aad hesho ka hor inta aadan saxiixin heshiiska kirada aad mulkiyadda marka dambe ku yeelaneyso. Ogoow qiimaha uu kuugu kacayo.
Hubi in iibiyuhu uu dhab ahaan leeyahay guriga. La xiriir diiwaangeliyaha guryaha oo weydii cidda iska leh guriga ee ka diiwan gashan degmada. Degmooyinka waaweyn qaarkood, diiwaanka hantida waxaa laga heli karaa barta internetka. La xiriir xafiiska diiwaan gelinta degmada si aad u ogaato.
Xafiiska diiwan gelinta ee degmada, ama barta internetka, ka ogoow haddii uu iibiyaha deyn ku qaatay guriga. Waa in aad hubisaa in qiimaha aad ku iibsaneyso uu ku filan yahay inuu bixiyo deynta, deynta laga doonayo inuu bixiyo iibiyaha. Haddii aan deynta la bixin waxaa suurogal in aad guriga aadan la wareegin.
Qaar badan oo ka mid ah heshiiska kirada ee marka dambe guriga lagu yeesho waxa ay waajib ka dhigaan lacag qadimaad marka la saxiixayo. Tani way ka duwan tahay keydka Ee Kirada (Security Deposit)? Inta badan keydka kirada waa laguu soo celiyaa, laakiin lacagta muqadamada ah laguuma soo celiyo haddii aadan gadan guriga. Si taxadar leh u akhri heshiiska.
Iska ilaali been abuurka. Qaar ka mid ah kireeyayaasha ma doonayaan in ay dhab ahaan iska iibiyaan guriga. Heshiiska kirada ee qofku ku yeelanayo marka dambe guriga waxa ay u isticmaalaan si ay lacag uga helaan kireystaha ama uu guriga uga shaqeeyo. Qaar ka mid ah kireeyayaasha ayaa sidaas isku daya waayo waxa laga qaadaa leesinka kirada ama ma doonayaan in ay guriga dayactiraan. Si wanaagsan u akhri heshiiska ka hor inta aadan saxiixin. Guriga baaritaan ku samee si aad ula socodo xaaladda guriga.
Qaar ka mid ah kireeyayaasha waxa ay doonayaan in aad mas’uuul ka noqoto dayactirka guriga sida uu dhigayo heshiiska kirada ee marka dambe lagu yeelanayo guriga. Taasi waa sharci daro. Waxa aad tahay kireyste waxaadna leedahay xuquuqda kireystaha. Akhri xogta urursan ee Akhbaarta Aasaasiga ah ee Kireystayaasha.